Lalana momba ny fitsinjaram-pahefana
Fampiharana mampiaraka ao Madagaskar
Ny filohanny Filankevitra eo aminny Vondrombahoaka no mamaritra ny laha-dinika aminireo fivoriana ireo. Na izany aza dia omena laharampahamehana ny Lehibenny mpanatanteraka hanolotra lahadinika. Aminio fivoriana io no anaovanny Lehibenny mpanatanteraka tatitra manokana aminny Filankevitra mikasika ny toe-java-misy iainanny Vondrombahoakamparitra itsinjaram- pahefana, ny asa sy famatsiam-bolanireo sampan-draharaha samihafa ao aminy sy ireo antokon- draharaha miankina aminy.
Io tatitra io dia milaza mazava ihany koa ny fipetraky ny fanatanterahana ireo fanapahana noraisinny Filankevitra sy ny toetry ny fitantanam-bolanny vondrombahoaka. andanihana ny tetibola fototra ho anny taona manaraka. Manatrika ny fivoriana izy ireo saingy tsy mandray anjara aminny fanapahan-kevitra. Izy ireo no miandraikitra ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana izay tokony ahitana ny vaninandro nanaovana ny fivoriana, ny vaninandro nanaikna ny Filankevitra hivory, ny anaranireo mpanolontsaina tonga nivory, ny anaranireo mpanolontsaina tsy tonga manatrika ny fivoriana, ny anaranireo mpanolontsaina nahatonga fialan-tsiny na tsia sy nanome fahefana hisolo tena azy.
Ny fitanana an-tsoratra dia tsy maintsy milaza an-tsipiriany ireo adi-hevitra, zava-tsy nampoizina ary hevitra izay nitranga mandritra ny fivoriana.
Azoko atao ve ny mifindra monina any Canada ho asa fanompoana manokana?.
mampiaraka tsy manam-bady akaiky Tuamasina Madagaskar.
tanàna mampiaraka Fianarantsoa Madagaskar.
Archive de l'auteur | NewsMada | Page ?
Ny fitanana an-tsoratra momba ny fivoriana dia tsy maintsy ahitana ny rijan-teny manontolo mikasika ny fanapahana, ny hetahetam-paniriana na ny fakan-kevitra nankatoavinny Filankevitra. Ireo fitanana an-tsoratra momba ny fivorianny Filankevitra dia tehirizina, ka alahatra araka ny vanim- potoana nanaovana azy, ao anatinny rejistra voaisa ravina sy vita rangopohinny Solontenam- panjakana mahefa ary avoaka ho fantatry besinimaro aminny alalanny peta-drindrina eo aminny toerana natokana ho anizany.
Ny olom-pirenena rehetra dia afaka maka dika mitovy aminny fitanana an-tsoratra ka iantohany ny sarany. Na dia izany aza, voafetra indray mandeha isam-bolana ihany ny fivoriana tsy ara- potoana ary tsy mihoatra ny telo andro ny faharetany. Aminizany, ny Filohanny Filankevitra dia tsy maintsy manaika ny mpikambana mba hivory rehefa misy fangatahana ho anizany, araka ny lahadinika voafaritra tsara, ataonny :.
tranonkala mampiaraka tsara indrindra any Tuliara Madagaskar.
TetikAsa iDin Antsipirihany.
mampiaraka anio hariva akaiky Antsiranana Madagaskar.
lehilahy manakaiky ny lehilahy Antsirabe Madagaskar.
filalaovana lalao Madagaskar.
Na manao ahoana na manao ahoana, dia tsy azo atao mihoatra ny telo andro ny faharetanny fivoriana tsy ara-potoana. Mandray anjara aminny adi-hevitry ny Filankevitra izy ary raiketina ao aminny fitanana an-tsoratry ny fivoriana ny fanehoan-keviny. Na izany aza, mivoaka ny efitrano fivoriana izy aminny fotoana andraisana fanapahan-kevitra.
Raketina ao anaty rejistra momba ny fanapahana izany ary atao petadrindrina na avoaka ho fantatry besinimaro. Alefa an-tsoratra any an-trano fonenana nosafidianireo mpanolontsaina folo andro farafahakeliny mialohanny fivoriana ny fiantsoana, ka hita ao aminizany ny lahadinika miaraka aminny famintinana mahakasika ireo raharaha handraisana fanapahan-kevitra. Mikasika ny fivoriana tsy ara-potoana, dia azonny Filohanny Filankevitra atao ny manafohy io fepotoana io araka ny tolo-kevitry ny Solontenampanjakana nefa tsy tokony ho latsaky ny iray andro feno mialoha ny fivoriana.
Tsy mikasika afa-tsy ireo raharaha voasoratra ao anaty lahadinika ny adihevitra ataonny Filankevitra mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Raha tsy tratra io fetrisa io, taorinanny fiantsoana voalohany natao aradalna, dia afaka mandray fanapahana ny Filankevitra aorianny fiantsoana faharoa, izay farafaratsiny mielanelana telo andro aminilay fiantsoana voalohany, na firy na firy isanny mpikambana tonga manatrika na soloin-tena araka ireo fepetra voalazanny andininy faha etsy ambany.
Afaka mandray anjara aminny adi-hevitra ataonny Filankevitra ny Lehibenny mpanatanteraka, fa tsy mandray anjara aminny fanapahan-kevitra. Misintaka izy aminny fotoananny fanapahan-kevitra. Raketina ao anatinny fitnana an-tsoratra ireo fanehoan-keviny nandritra ny fivoriana.
Raha tahiny ka mitovy ny isam-bato, afa-tsy aminny latsabato miafina, dia ny hevitra ironanny Filoha no mahazo tombon-dahany. Ny mpitazona bokim-bola voalohany eo aminny Vondrombahoaka dia manatrika, ho fakan-kevitra, ny fivorianny Filankevitra mikasika ny tetibola, ny kaontim-pitantanana ary ny laha-dinika hafa rehetra ilna ny fahatongavany.
Na izany aza, dia azo atao ny mamindra ny zo handatsam-bato aminny mpikambana hafa iray nomena fahefana aminizany. Ny mpikambana aminny Filankevitra tsy afa-manatrika ny fivoriana dia afaka manome fahefana ny mpikambana hafa nofinidiny, aminny alalanny fanomezam-pahefana an-tsoratra, mba handatsa- bato aminny anarany. Tsy mahazo mandray afa-tsy fanomezam-pahefana tokana ihany ny mpikambana iray ao aminny Filankevitra.
Raketina ao aminny fitanana an-tsoratra momba ny fivoriana ny isanny mpandatsa-bato miaraka aminny vokatry ny fifidianana natao. Miroso aminny latsabato miafina ny Filankevitra isakizay mitaky izany. ny ampahefatry ny mpikambana tonga mivory, na rehefa hanao fanendrena na fisoloan-tena. Aminio tarehin-javatra farany io, raha tsy nisy na dia kandid iray aza nahazo ny antsasa-manilanny vato rehefa natao ny fihodinana indroa miantoana taminny latsabato miafina, dia miroso aminny fihodinana fahatelo ka izay mahazo vato be indrindra no lany.
Raha mitovy ny isam-bato azo, dia ny kandid be taona no lany. Mandany ny fitsipika anatiny ny Filankevitra aminny alalanny fanapahana ao anatinny telo andro aorianny nandraisany ny asany. Ny fitsipika anatinny Filankevitra no mamaritra indrindra indrindra ireo fombafomba fampiharana ny fanontaniana am-bava sy fanontaniana antsoratra ary ny fangataham-panazavana atao aminny rafitra mpanatanteraka. Na izany aza, azonny Filankevitra atao ny mandray fanapahan-kevitra tsy azonny besinimaro atrehina araka ny tolo-kevitry ny Filohanny Filankevitra, na noho ny fangatahanny Lehibenny mpanatanteraka, na ny ampahefatry ny mpikambana tonga manatrika farafahakeliny.
Azonny Filohanny Filankevitra atao ny mangataka ny mpitandro ny filaminana izay mitoetra ao anatinny Vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana, raha toa ka ilaina izany. Sokajy faha-2 : Ny fepetra mihatra aminny Filankevitra sy ny mpikambana ao aminy Art.
Ny dika mitovy aminny laharanny fiamboniana dia apetraka eo aminny biraonny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana voakasika, sy ny biraonny Solontenam-panjakana mahefa ka azonny mpikambana tsirairay fantarina. ny antso taminny fanaikna hivory in-telo misesy, kanefa tsy misy antony marimpototra na ara-dalna hitanny Filankevitra, dia esorina tsy ho mpikambana ao aminny Filankevitra ho anny fotoam-piasany sisa tavela, rehefa avy nasaina nitondra fanazavana. Ireo tsy fahatongavana mivory dia amarinina aminny alalnny filazana ao anatinny rejistra voatokana handraisana ireo fitanana an-tsoratry ny Filankevitra.
Ny Filohanny Filankevitra no mampafantatra izany aminny Lehibenny mpanatanteraka, ary ity farany no mandefa ny tatitra any aminny Solontenampanjakana mahefa, ka izy indray no mampakatra ny raharaha eny aminny fitsarana mahefa miandraikitra ny ady aminny Fanjakana. Raha vantany vao maharay fametraham-pialna ny Filohanny Filankevitra dia mampafantatra izany ny Lehibenny mpanatanteraka ary ity farany no mitondra ny raharaha eo anatrehanny Solontenam-panjakana mahefa.
Raikitra tanteraka ary tsy azo sintonina intsony ny fametraham-pialna raha vantany vao voarainny Filohanny Filankevitra. Mihatra aminny mpiasam-panjakana koa ireo fepetra voalaza ireo. Sokajy 3 : Ny aminny vaomiera Art. Mandritry ny fotoam-pivoriana, dia omanina eo anivonny vaomiera ny asa sy ny adi-hevitra ataonny Filankevitra. Fanapahana raisinny Filankevitra no ananganana ireo vaomiera ireo. Tsy maintsy mikambana ao aminny vaomiera iray farafaharatsiny ny mpanolotsaina tsirairay.
Ny filohanny vaomiera no miandraikitra ny fiantsoana ny mpikambana ao aminy. Ny fitanana an-tsoratry ny vaomiera dia iantohana araka ny fepetra mitovy aminny anny fotoam-pivoriana ataonny filan-kevitra voalazanny andininy faha etsy ambony. Sokajy faha-4 : Ny aminny fahabangan-toerana And. Na koa ireo antony hafa rehetra hita fototra. Ampitainny Lehibenny mpanatanteraka any aminny Solontenampanjakana mahefa any aminny faritra ny taratasy fametraham-pialanny mpikambana ao aminny Filankevitra. Ny fitsarana dia mampahafantatra ny fanapahana noraisiny mizaha fototra ny fahabangan-toerana aminny Minisitra miandraikitra ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana.
Na izany aza, ny fifidianana ampahany mba hanoloana ny mpikambana ao aminny Filankevitry ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana dia tsy afaka tanterahina raha tsy ny antsasa- manila farafahakeliny ny toerana eo anivonizany filankevitra izany no banga. Tsy misy fifidianana aminny ampahany azo atao intsony raha toa ka ao anatinny efatra amby roapolo 24 volana mialoha ny fahataperanny fotoampiasana no misy fahabangan-toerana. Izany dia tarihinny Lehibeny voafidy aminny alalanny latsa-bato andraisanny daholobe anjara, araka ny fepetra faritanny lalna, ary ahitana ireo tomponandraikitry ny sampan-draharaham-panjakana natsangana sy vatsianny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana vola izy tenany ihany, na natolotry ny Fanjakana ho azy.
Anaovana fanapahana raisinny Filankevitra ny rafi-pandaminana raikitra ho anny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. mpanatanteraka, ka ny isany dia ferana arakaraky ny fahafaha-manao arabolanny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Atsahatra aminny asany izy ireo araka izany fomba sy fepetra izany ihany koa. Tsy azo ampirafesina aminny asanny mpanolo-tsainy ny andraikitra maha mpikambana ao aminny rantsana mpanatanteraky ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Ny rantsana mpanatanteraka dia ahitana ny Lehibenny mpanatanteraka sy ny na ireo lefiny.
Ny Lehibenny mpanatanteraka, lehibenny fitantanandraharahanny vondrombahoaka misy azy, dia manana mpiasa misahana ny fitantanan-draharaha sy ara-teknika tendrena aminny alalanny didy amampitsipika.
Ny mpitan-kaontim-panjakana voalohany eo aminny Kaominina ambanivohitra tsy manana mpitan-kaontinny tahirimbolam-panjakana dia tendrena aminny alalanny didim- pitondrana raisinny Minisitra miandraikitra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola araka ny tolo-kevitra nataonny Benny tanna aorianny fanehoan-kevitra araka ny tokony ho izy nataonny Lehibenny Distrika mahefa eo aminny faritra. Mitoetra hatrany ireo famindrana fahefana ireo andraikitra ireo raha mbola tsy nofoanana. Raha misy fifanolanana ara-tombontsoa mampifanohitra ny Lehibenny mpanatanteraka sy ny Filohanny Filankevitra na ny mpikambanny Filankevitra voatendry sy ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, dia ny antsasa-manilanny mpikambana ao aminny mpanolo-tsaina no manendry iray.
hafa aminny mpikambana iray hafa ao aminy hisolo tena ny vondrombahoakamparitra itsinjaram-pahefana any aminny fifanarahana. Ny fivoriana dia afaka tanterahina ampahibemaso na koa tsy azo atrehinny daholobe. Azonny Lehibenny mpanatanteraka atao ny manasa olona hanatrika ny fivorianny rantsana rafitra mpanatanteraka ny olona rehetra izay, noho ny fahaiza-manao ananany, ka afaka mitondra fampahalalam-baovao ilaina mikasika ireo raharaha voasoratra ao aminny laha-dinika.
Sokajy faha-2 : Ny aminny fahabangan-toerana And. Na izay rehetra antony hafa mahatonga tsy fahafahana voamarina sy hita fototra ara-dalna. aminny Fanjakana. Aminny trangan-javatra rehetra, tsy afaka aongana izy afa tsy aminny alalanny didim-panjakana raisina eo aminny filan-kevitry ny Minisitra, aorianny fanamelohana navoakanny fitsarana mahefa.
Ny didi-pitondrana fampiatoana sy ny didim-panjakana fanonganana dia tsy maintsy omban antony. Ny fampakarana dia azonizay voakasika atao eo anivonny Filankevi-panjakana folo andro aorianny fampahafantarana izany. Ampahafantarinny fitsarana ny Minisitra miandraikitra ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ny fanapahana nahitana fototra ny fahabangan-toerana. Tsy misy fifidianana aminny ampahany intsony raha toa ka ao anatinny roa ambinny folo 12 volana mialoha ny fahataperanny fotoam-piasana no misy fahabangan-toerana. Ny delegasionina manokana dia misahana ireo anjara raharahanny rantsana rafitra mpanatanteraka ny Vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana.
Aminny tranga rehetra, ny delegasionina manokana dia tsy afaka misolo ny rantsana mpanapa-kevitry ny vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana izay manohy hatrany ny fisahanany ny asany. Ny delegasionina manokana dia ahitana Filoha iray sy filoha lefitra roa izay tendrena aminny alalanny didim-pitondrana raisinny Minisitra miandraikitra ny Atitany.
Zaadoptuj wirtualnie dziecko z Madagaskaru
Aminny tranga rehetra,. manokana dia tsy afaka mirotsaka ho fidina aminny fifidianana ho avy. Faritanny didim-panjakana raisina eo aminny Filankevitry ny Governemanta araka ny tolo-kevitry ny Minisitra miandraikitra ny Atitany ireo fombafomba fiasanny delegasionina manokana.
Ny fahefana dia miankina aminny fitsarana misahana ny ady aminny Fanjakana no mahefa aminizany.
nandritra ny herinandro iray na $
TOKO VOALOHANY : NY AMINNY TETIBOLA Sokajy voalohany : Fepetra ankapobeny And. Tsy maintsy atao mifandanja ny sokajim-pampandehanan-draharaha sy ny fampiasam-bola hamokarana ao aminny tetibola. Hisy rijan-tenin-dalna fampiharana ity andininy ity. Ny tombatombana izay voarakitra ao anaty tahirin-kevitra tokana, dia tsy maintsy atao aminny antsipiriany marina sy mifantoka aminny tena zava-misy.
Azony atao, aminny alalanny didim-pitondrana raisinny Faritany, Faritra, Kaominina, ny mamindra ny fahefana aminio lafiny io aminny lefiny iray na maromaro. Ireto farany ihany koa dia afaka mamindra, aminny alalanny fanapahana, ny anjara raharahanizy ireo aminny maha mpanalalana azy ireo aminny mpiasa nosafidiny aminireo tomponandraikitry ny sampandraharaha eo ambany fahefany, sy izay mitondra ny anarana mpanalalana ambaratonga faharoa.
Ny mpanalalana ambaratonga faharoa dia tsy maintsy mpiasampanjakana avy eny anivonny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, izay tsy misahana ny andraikitry ny mpitan-kaontim-panjakana ary manana ny fahaiza-manao takinio asa io. Ny fitondrana fitanan-kaontinny Kaominina ambanivohitra dia ferana aminny alalnny didim-pitondrana raisinny Minisitra misahana ny fitantanambola sy tetibola. Na manao ahoana na manao ahoana, ny tetibolanny vondrombahoakamparitra itsinjaram- pahefana dia tsy tokony haneho fatiantoka na aminny tahirimbola na aminny fiandraiketana fandaniana.
Sokajy 2 : Ny aminny fanomanana sy fandaniana ny tetibola Art. Ny fanaovana ny fandaharanasa momba ny teti-bola dia tsy maintsy ampiarahina aminny fanadihadiana ireo lanjam-bidy izay maneho ny mahamaripototra ny teti-bola sy ny fanatsarana araka ny tokony ho izy ny fisafidianana ireo lanjam-bidy izay maneho ny mamarim-pototra ny tetibola sy ny fanatsarana araka ny tokony ho izy ny fisafidianana ny fandaharanasa hampiharina sokajinasa izay tsy maintsy atao tovana aminny tetibola.
Tsy azo atao ny mamorona sampan-draharaha na asa vaovao raha tsy efa voatsinjo mialoha ao aminny teti-bola ny sora-bola ho anny sokajy mifanandrify aminizany. maintsy ampidirinny rantsana rafitra mpanatanteraka ho isanny fandaniana mikasika ny fampandehanan-draharaha sy fampiasam-bola hamokarana ao aminny tetibola tamboalohany Ny famindram-bola avy aminny fanolorana ataonny antokon-draharaha iray ho anny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana dia mitazona ny fanokanana azy raha toa ka misy izany.
Na manao ahoana na manao ahoana, ny fanampiana ara-bola natokana aminny sokajy fampiasam-bola famokarana dia tsy afaka afindra na oviana na oviana any aminny sokajy fampandehanan-draharaha. Toy izany koa, ny ambim-bola tsy lany aminny sokajy fampiasam-bola taminny tetibolanny taona teo aloha dia tsy azo afindra any aminny sokajy fampandehanan-draharaha aminny tetibolanny taona iasana Ny fanomezana vatsy dia miankina aminny fisianny fandaharanasa momba ny fampiasam-bolam- panjakana araka ny tokony ho izy mikendry ny tombontsoa eny ifotony.
Izany dia tsy maintsy mihevitra ny fitsinjarana aradrariny sy mifandanja ireo loharanom-bola.
Related fampiharana mampiaraka ao Madagaskar
Latin mampiaraka aminny Madagaskar
Mampiaraka tovovavy iray avy ao Tuamasina Madagaskar
HOOKUP IN Mahajanga Madagaskar
Mampiaraka vehivavy Madagaskar
Mampiaraka atsimo Fianarantsoa Madagaskar
Mampiaraka olona avy akaiky Tuamasina Madagaskar